Mubvunzo wako Nhai! Ndiri kufarira mushonga weLithiumeel. Sezvo ine zvibvumirano zviviri uye zvingave zvakasiyana (idzi ruzivo haruna kuratidzwa mubhokisi), unogona kutumira mirayiridzo, tapota. Nemwoyo wose, Catherine.
Zvinosuruvarisa kuti hatigoni kutumira mirayiridzo. Isu tinotenga kubva mune imwe nzvimbo muSwitzerland, uye hapazovi nemirairo kusvikira tatenga. Iwe unogona kutarisa chero mabhuku ekurapa mazvipatara muSwitzerland uye anorongerwa nenyaya nhamba. Mishonga yose ine iyo.
Tinyora nyaya iyi pa info@swiss-apteka.com uye tichajekesa kukosha kwayo.
Panguva iyo muSwitzerland haisi kutengeswa. Onawo shanduro yechiGermany inowanikawo pakuberekwa:
Ndapota nyora zita
Ndapota fungai foni
Ndapota nyora E-mail yako
Zadza gwaro rekushandisa